Loza an-dranomasina tao Mahajanga: rendrika ny “Maevadia”, mpandeha enina maty | NewsMada
Nisehoana faharendrehana lakana tany Mahajanga, ny asabotsy alina teo ka nahafatesana olona maromaro. Vokatry ny toetr’andro ratsy no nahatonga izany, kanefa mbola nandeha an-tsokosoko ilay lakana ka tra-doza.
Olona enina no namoy ny ainy narendriky ny lakana, ny asabotsy alina teo tany Mahajanga. Zazakely ny telo tamin’ireo, nisy kambana ary renim-pianakaviana ny telo hafa. Tsy hita popoka kosa ny olona telo hafa, izay fantatra fa mbola nisy zaza roa ary lehilahy ny iray, io asabotsy alina io. Omaly alahady no fantatra fa nisy olona iray hita faty tamin’ireto farany. Kambana ny iray tamin’ireo zaza kosa, efa hita faty, saingy mbola tavela tsy hita any anaty rano ny kambana aminy. Olona 11 hafa kosa avotra soa aman-tsara tsy nisy naninona. Olona 20 ny mpandeha tamin’ity lakana antsoina hoe Maevadia ity. Voalaza fa tsy fantatra mazava ny toerana niaingan’ilay lakana satria tsy teo amin’ny fiaingana mazatra any Mahajanga. Fantatra kosa fa hihazo an’i Maroalika Soalala ireo mpandeha ireo. Efa nentina any amin’ny hopitaliben’Androva ireo tra-boina ary eny amin’ny tranompaty kosa ireo razana efa hita.
Efa nisy fandrarana
Tonga teny an-toerana nanao ny asa famonjena ny avy amin’ny zandary sy ny APMF. Ireto farany izay efa namoaka fepetra ny amin’ny tsy tokony handehanan’ny lakana, io sabotsy io noho ny toetry ny andro, saingy voalaza fa nandeha an-tsokosoko ity lakana ity ka izao tra-doza izao. Matetika misy ny fandrarana rehefa ratsy ny toetr’andro, kanefa koa misy hatrany ny mandika izany, sady mandeha amin’ny alina. Tsy nisy ihany koa ireo karazana akanjo fiarovana anaovan’ny mpandeha lakana na sambo. Manao ny fanadihadiana rehetra ny mpitandro filaminana.